သနပ်ခါးမေ: ဝက်ခြံ ဝက်ခြံ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့
မြတ်ကြည် August 26, 2011 at 5:09 PM
စီးပွါးဖော်၊ စီးပွါးဖက် တွေဆိုတော့ warmly welcome။ :D မချောကိုလည်း ကျေးဇူး ပါလို့။ နောက်အားရင်လည်း လာလည်နော်။
Obagi Nu-Derm set ကိုတော့ ရှာဝယ်လို့ရတယ်... Retin A ကရော... ဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲဟင်...
မြတ်ကြည် August 28, 2011 at 1:19 AM
Retin A က ဆေးဆိုင်တွေမှာ ရနိုင်ပါတယ်ရှင်။ အကယ်၍ prescription လိုတယ်ဆိုရင် မြန်မာပြည်က လှမ်းမှာလိုက်ပါ။ ဆေးဆိုင် တော်တော်များများမှာရှိပါတယ်။
Anonymous August 28, 2011 at 4:38 AM
ကျေးဇူးပါနော်... ၀က်ခြံက ဘာသုံးသုံးအရှင်းမပျောက်ဘူးဖြစ်နေတာ... ဒီနေ့မျက်နှာမှာဘာမှမရှိလို့စိတ်ချမ်းသာမလို့ရှိသေး... နောက်ရက်ကျ ပြန်ထွက်နေပြန်ရော... မျက်နှာက အရမ်းsensitive ဖြစ်တော့ အဖုလေးထွက်လာတာနဲ့ အမဲစက်ဖြစ်သွားတာ... :(
How can I buy Obagi? Can I buy online?
myatkyi August 28, 2011 at 8:36 PM
Online မှာ ရောင်းတာတော့ တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မ က တော့ ဆေးရုံက ဝယ်တာပါ။
Myat Kyi yay,
Roaccutane, Accutane, Amnesteem ,where can I buy at Yangon ?
မြတ်ကြည် January 26, 2014 at 8:02 PM
M2Y, ​ဆေးဆိုင်​မှာ vitamin A တစ်​လစာ​သောက်​မယ်​မှာလိုက်​, ရတယ်​ :)
thank you myat kyi yay
Blash Blash May 12, 2016 at 9:11 PM
Chit Noe Thu September 9, 2016 at 6:47 PM
အမ​ရေ ကူညီပါဦး ကျွန်​​တော်​မျက်​နှာမှာ ဝက်​ခြံအများကြီးပါပဲ့ ​ပျောက်​လိုက်​တက်​လိုက်​ပါပဲ့ခုလက်​ရှိက clinott-150 ​ဆေးကို​သောက်​​နေပါတယ်​​သောက်​စက​ပျောက်​ပါတယ်​ ​နောက်​​တော့ပြန်​တက်​လာတယ်​​ဆေးယင်​လို့လားမသိဘူ​နောက်​ထပ်​မ​ကောင်း​တော့ပါဘူးနနွင်းကိုသန်​လွင်​ဆီမပါပဲ့လိမ်းဖူးပါတယ်​ပို​တောင်​ဆိုးလာပါတယ်​အမ​ညွန်​ပြတဲ့​ဆေး​တွေကအများကြီးပါပဲ့ကျွန်​​တော်​တို့ boy​တွေဆို ဘာ​ဆေးကိုဝယ်​​သောက်​ရင်​​ကောင်းမလည်းညွန်​ပြပါဦး အမ အားကိုးပါတယ်​​ပျောက်​ချင်​လို့ပါ
Myat Kyi Thein October 11, 2016 at 7:03 AM
Vitamin A ပါတဲ့ အားဆေးရှိတယ်မောင်လေး ။အဲဒါတော်တော်အဆင်ပြေတယ်